Dowladda Mareykanka Oo Diiday Inay Duulimaadyada Ka Mamnuucdo Diyaaradda Boeing 737 Max 8 – somalilandtoday.com
Dowladda Mareykanka Oo Diiday Inay Duulimaadyada Ka Mamnuucdo Diyaaradda Boeing 737 Max 8
(SLT-Washington)-Dowladda MNareykanka sheegay in aysan shaqada ka joojinayn diyaaradda nooca Boeing 737 Max 8 inkastoo xildhibaanada aqalka sare iyo ururada shaqaalaha ee dalkaasi oo dowladda cadaadis ku saarayo in diyaaraddaasi laga mamnuuco duulimaadyada ilaa iyo inta laga xaqiijinayo badqabkeeda.
Maamulka Duulimaadyada ee Maraykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo FAA ayaa sheegay in ilaa iyo haatan aysan muuqan cillad lagu mamnuuci karo diyaaraddaasi.
Diyaarad laga leeyahay dalka Itoobiya oo ka soo duushay garoonka diyaaradaha ee Addis Ababa ayaa axaddii la soo dhaafay burburtay lix daqiiqo oo kaliya markii ay hawada ku jirtay, waxaana shilkaasi ku dhintay 157 qof oo saarnayd.
Shilkaasi waxaa ka sii horreeyay shil kale oo ay ku dhinteen 189 qof oo rakaab ahayd oo saarnaa diyaaradda Lion Air 737 Max 8 oo burburtay bishii Oktoobar ee sanadkii hore.
Qaar ka mid ah dalalka reer Galbeedka ayaa soo saaray amar ay hawada dalalkooda uga mamnuucayaan inay ku duusho diyaaradda ay soo saarto shirkadda Boeing ee nooceedu yahay 737 MAX 8.
Waddamada Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay in aysan hawadooda soo galin karin diyaaraddan.
Ted Cruz, oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka Senedka ee Mareykanka ayaa sheegay in uu rumeysan yahay in ay muhiim tahay in Mareykanka uu hakiyo duulimaadyada diyaaraddani ilaa iyo inta laga xaqiijinayo in ay tahay badqab oo la isticmali karayo.
Edward Markey iyo Richard Blumenthal oo iyaguna ka tirsan xisbiga Dimuquraadiga ayaa maamulka duulimaadyada ee Mareykanka ka codsaday in la hakiyo duulimaadyada diyaaraddan Boeing 737 Max ilaa iyo amar dambe.
Shirkadda Boeing ayaa ku adkeysanaysa in diyaaraddani tahay mid badqab ah oo aan la hayn wax cillad ah.
Shaqaalaha shirkadaha diyaaradaha ee Mareykanka ayaa doonaya in diyaaraddani laga mamnuuco duulimaadyada ilaa ammaankeeda laga xaqiijinayo.
Waxyaabaha shakiga keenay waxaa ka mid ah in labada diyaadoodba ay ahaayeen kuwa cusub, waxaana jiray isku mid ahaansho sida uu shilka u dhacay, labaduba waxa ay soo dhaceen daqiiqado kadib markii ay haadeen, taas oo muujin karta cilad ay diyaaradu leedahay.
Boeing oo kaliya ma ahan waxa saameynta uu shilka ku yeeshay, ee sidoo kale shirkadda Safran ee Faransiiska ee iyadu samaysa matoorka diyaaradan ayuu hoos u dhacay saamiyadeeda
Dowladda Hindiya ayaa iyadu sheegtay in wada hadal kula jirto laamaha qaabilsan badqabka duulista hawada sare, go’aana ka gaari doonto sida laga yeelayo diyaaradan.
Shirkadda duulimaadka ee dalka Koonfur Afrika ayaa dhankeeda shaacisay in ay joojin doonto isticmaalka diyaaradda Boeing 737 illaa intii muddo ah.
Illaa 16 shirkadood oo kuwa duulimaadka ah ayaa isticmaala diyaaradda Boeing 737 Max 8.
Tusaale shirkadda TUI waxa ay leedahay 15 ka mid ah noocan , waxayna sheegtay in ay xiriir dhow la waddo shirkadda Boeing , balse waxa ay intaas ku dartay in aysan jirin wax qorshe dhow oo ay ku joojineyso isticmaalka diyaaradan.
Shirkadda Duulimaadka Norway oo haysata 18 ka mid ah diyaaradahan ayaa iyaduna sii wadda isticmaalka 737.
Shirkadda Southwest Airline waxa ay leedahay 34 noocan ah, halka Maraykanka iyo Canada ay isticmaalaan 24 xabbo oo kuwan ah midkiiba.
By Wariye November 25, 2020
Guddoomiye-ku-xigeenka labaad ee xisbiga KULMIYE, Mudane Axmed Cabdi Xuseen (Axmed Cabdi-dheere), ayaa maanta Guddoomiye cusub u...
(SLT-Nigeria)-Dowaladda Niger ayaa shaacisay in Madaxweynihii hore ee dalkaas Tanga Mamadou oo ahaa 82 jir geeriyoday,...
(SLT-Muqdisho)-Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdushakuur Warsame ayaa markii u horeysay laga wareystay taariikhda Taliyaha awoodda badan...
(SLT-Dimishiq)-Dowladda Suuriya ayaa maanta oo arbaca ah sheegtay in Millatariga Israa’iil ay duqeeyeen koonfurta magaalada Dimishiq,...
(SLT-Paris)-Booliiska Faransiiska ayaa qaab xoog ah oo dad badani ku tilmaameen arxan darro ku dumiyey, xeryo...